We Fight We Win. -- " More than Media ": လူ့အဆင့်အတန်း ကို မြှင့်တင်ကြ
လူ့အဆင့်အတန်း ကို မြှင့်တင်ကြ
ဒီမိုကရေစီနှင့်လူအခွင့်အရေး သာလျင် မြန်မာ တမျိုးသားလုံး ရဲ့ထွက်ပေါက်အမှန်ဖြစ်တယ်။
တရားဥပဒေရှိမှ သာ အမျိုးဘာသာသနာကို အဆင့်တန်းရှိရှိကာကွယ်နိင်မည်။
အမျိုးဘာသာသနာကို အောက်တန်းကျတဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်လို့ မရ ။
သင့်အသိညဏ် ကို ယုံကြည်ပါ။
ko may ko low.
myanmar pyee ko pyan lar pyee nay yar lay ya ma larr lolt lar chaung tr
bal thu hma ma htaut khan lolt pyan thwar pyee
khu kya tot ko nay yr ma ya tr nalt
sarr pout lay lal chaung ag
tine pyee lal pyat ag so pyee
ka lar si ka pite san u
ka larr ko lee sout pay nay tr
a kone lone thit tal
min yalt nyit pat sout pyat pyee out tan kya talt sate dat ko
tha taung sar
Pls come back to Myanmar to built up as you said. Don't shout loud outside on air. We need hand-on, practical and physical. We don't need as you and your oxygen group. You're liar.